Usayizi waphansi: 2722.51 Sq feet
Amaphrojekthi wezezakhiwo akamuva akhuphule inani lamathuba okutshalwa kwezimali eMozang. Uma ufuna ukuthenga le ndawo ngokusetha indawo yakho uqobo ye-real estate, khona-ke sicela ulalele amagama ethu, bese uyibhuka kabili. Yini engaba ngcono kakhulu kunempahla enentengo kuma-Rs 25,000,000. Futhi, inezici ongazithanda nakanjani! Ngeke uyithole iNdlu kanjena kaningi. Ngakho-ke, kungcono ukushaya iwashi ngaphambi kokuba omunye umuntu alibambe ukuze athole induduzo. Le ndawo engu-10 kaMarla ilingana kahle nencazelo oyifakile. Zonke izinsiza ezibalulekile nezinsizakusebenza zenziwa zitholakale eMozang. Sishayele imininingwane.
Faisal Islam Ch
Xhumana nomkhangisi +92321407xxxx